Ọchịchọ: Gamification Iji Jikwaa, Mkpali, na jirichaa Ahịa Gị Team ịrụ ọrụ | Martech Zone
Wenezdee, Machị 17, 2021 Wenezdee, Machị 17, 2021 Brian Trautschold
Ahịa arụmọrụ dị mkpa maka azụmahịa ọ bụla na-eto eto. Site na ndị otu na-ere ahịa, ha na-enwe mkpali karịa ma jikọọ na ebumnuche na ebumnuche nke nzukọ a. Mmetụta na-adịghị mma nke ndị ọrụ ewepụrụ na nzukọ nwere ike ịdị oke - dị ka arụpụtaghị ọrụ, na ịla n'iyi na akụrụngwa.
A bịa na ndị otu ahịa ọfụma, enweghị itinye aka na-efu azụmaahịa na-enweta ego ha ga enweta. Ndị ọchụnta ego ga-achọta ụzọ ha ga - esi tinye aka na ndị otu ahịa, ma ọ bụ nwee ihe egwu iwulite ndị na - adịghị arụ ọrụ na - arụpụtaghị ihe na oke ntụgharị.
Nchịkwa ahịa Management Platform
oké ọchịchọ bụ usoro njikwa ire ahịa nke na-emekọrịta ngalaba ọ bụla na-ere ahịa, isi data, na arụmọrụ metric ọnụ n'otu usoro dị mfe. Ọchịchọ na-enye nkọwa doro anya ma na-egosi nyocha oge arụmọrụ maka ụlọ ọrụ ahịa niile.
Iji mfe ịdọrọ-na-dobe interface, ọbụlagodi ndị na-abụghị ndị ọrụ teknụzụ nwere ike ịmepụta akara ngosi omenala, asọmpi, akụkọ, na ndị ọzọ. Ndị a bụ ụzọ ole na ole ndị isi ahịa ndị isi na-eji Ambition na teknụzụ ha.
Were Peloton wee gbanwee ya ka ọ bụrụ sọftụwia maka otu ndị na - ere ahịa ma ị nwere ochicho obi –achị nkuzi na - agba ume. Na Peloton, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịhụ ebe ha kwụ na njem ahụ ebe ha na-emewanye ihe ha na-arụ. Site na ngwanrọ ngwanrọ egwuregwu, ndị isi ahịa nwere ike mepụta ahụmịhe yiri ya na asọmpi efu, TV ahịa, isi na SPIFF iji nyere aka mee ka mgbanwe dị mkpa n'ime nzukọ ahụ.
Gamification adịwo kemgbe ọtụtụ iri afọ, n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ. Ndị otu ire ahịa achọpụtala uru n'ịmepụta ihe nkwado na ịgba ume asọmpi iji mepụta njikọ aka dị elu na ọkwa mkpali n'etiti ndị na-emegharị. Emechakwa, onye na-anaghị amasị obere asọmpi?
N’ịbụ onye mbugharị na-agba ọsọ na ọrụ dịpụrụ adịpụ na-akwalite, ịmegharị egwuregwu agbanweela site na "ọmarịcha ịnwe" gaa na "mkpa-inwe". Nza ajụjụ n'etiti ndị otu adịgo mkpa karịa ka otu ndị ahịa anaghị anọrịrị n'ahịa ahịa. Gamification nwekwara ike inye ndị isi ahịa nghọta otu esi emegharị na-arụ ọrụ mgbe ha na-arụ ọrụ site n'ụlọ wee nye ha ohere ịgba asọmpi ahụike.
Ahịa Coaching Software
Cozụ ahịa ịre ahịa bụ ihe kachasị emetụ n'ahụ na-eduga nwere ịbawanye arụmọrụ nke onye na-ere ahịa yana, n'aka nke ya, nwee mmetụta dị mma na ndị otu ahịa ahụ dum. N'agbanyeghị ụlọ ọrụ ahụ, ntụgharị bụ nsogbu a ma ama na ire ere, yana ohere mmepe ọkachamara nwere ike ibute otu ihe na-akpali onye ọrụ ịnọrọ.
Na ndị otu adịkwaghị n’ala, ndị isi ahịa enweghị ikike ịkwụsị site na tebụl rep ma jụọ otu ha si eme, hụ ebe ha chọrọ enyemaka ma ọ bụ zaa ajụjụ na-egbu oge. Agbanyeghị, na Ambition, ịnye ọzụzọ ahịa na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị njikwa azụmaahịa ka ha na-aga n'ihu na-agbanwe ọnọdụ ha dịpụrụ adịpụ. Maka ụlọ ọrụ buru ibu na obere, ndị isi ahịa nwere ike ịtọlite ​​nzukọ na-aga n'ihu, dekọọ mkparịta ụka, ma chekwaa atụmatụ ime ihe niile n'otu ebe. Mgbanwe mgbanwe na mmemme siri ike na-enye ndị isi ohere ịmebe mmemme nke aka ha ma mezie nzukọ a na-eme ugboro ugboro yabụ, mgbe ndụ batara n'ụzọ, a na-ahazi nzukọ ahụ.
Nghọta Ahịa na njikwa arụmọrụ
Otu ahia bu igwe n’enyere ahia obula aka. Usoro njikwa arụmọrụ nke ụlọ ọrụ kwesịrị ilekwasị anya na idobe injin a nke ọma, ọzụzụ ọzụzụ na ikike ha chọrọ iji nweta ebumnuche nhazi na nyochaa ọganihu ha ka ha na-aga n'ihu.
Site na data CRM na-enye ikike ịrụpụta nrụpụta na asọmpi, ndị isi azụmaahịa nwere ike ijide n'aka na ndị na-anọchite anya ha na-egbu osisi ha niile, ebumnuche ha, na ndetu na ndị ahịa ugbu a na ndị nwere ike. Ndị isi ahịa na-enwetakwa visibiliti n'ime oku ma ọ bụ ozi ịntanetị emechara, yana nzukọ ma ọ bụ mezue nzukọ, wee lelee ndị na-arụ ọrụ iji hụ onye na-agbanwe ọrụ n'ime ebumnuche na nsonaazụ.
Maka ndị na-ere ahịa na-achọ inweta nghọta n'ime ọrụ ndị na-ere ahịa ha kwa ụbọchị, ikpo okwu Ambition na-enye ndị ahịa ọ bụla akara akara nke gụnyere ihe mgbaru ọsọ kwa ụbọchị. Ndị isi ahịa nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na onye nnọchi anya ahapụ ụbọchị ahụ na-enweghị 100% mmecha ọrụ ma nye ha ohere ịhazi oge nkuzi ọsịsọ iji nyere ndị na-azụghachi aka ịlaghachi na egwu. Mgbe enweghị nri tozọ iji nyochaa otú ndị na-ere ahịa na-esi arụ ọrụ, na-eji usoro njikwa arụmọrụ, dị ka Ambition, nwere ike hụ na ịnweta data a pụrụ ịdabere na ya ma mee ka ndị na-ere ahịa na ndị isi ahịa nwee nghọta iji dozie ụzọ ha.
N'ime Ndị njikwa ahịa 3,000 leverage Mmasị na-enyere aka ịme ka oku ọzọ, debe nzukọ ndị ọzọ, ma mee ememme ndị ọzọ emechiri emechi maka ndị ahịa ha dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ọfịs. Dị ka ọtụtụ ndị isi ahịa na-achọ itinye ọnụ ọgụgụ nke nyiwe ha na-eji, Oké ọchịchọ na-eme ya niile. Site na nchịkwa ahịa na ndị isi, Ambition na-enyere ndị isi ahịa aka ịme mkpebi ndị nwere ọgụgụ isi karị na nke na-enye ndị otu ohere ịnyefe arụmọrụ kacha mma achọrọ iji wepụta nsonaazụ.
Ambition na-ejikọta na Salesforce, Slack, Dialsource, Cisco, ringDNA, Velocity, Gong, SalesLoft, Chorus, na Outreach Team Otu Microsoft na-abịa n'oge adịghị anya. Iji mụtakwuo banyere Oké ọchịchọ na otu ị si ejikwa ahịa ahịa gị:
Hazie Demo Demo Taa
Tags: ọchịchọCiscoCRMỌrụ mgbasa oziụlọ ọrụ ahịaGongNgalaba Microsoftije ozigbomgbanakaDNAire ahịaihe omuma ahianjikwa ahiaọnụ ahịa ire erenkwali ahịaarụmọrụ ahịanjikwa arụmọrụ arụmọrụarụpụtaghị ahịaahịa akụkọakara ahịaotu ahiandị ahịaỌrịre ahịaslackọsọ ọsọ
Brian Trautschold bụ ngalaba-onye nchoputa na COO na oké ọchịchọ, Ikwupụta arụmọrụ njikwa arụmọrụ a kwadoro maka data na-arụ ọrụ na otu puku afọ na-ere ahịa. Jikọọ na Brian na Twitter na LinkedIn wee bido mkparịta ụka gbasara ụfọdụ isiokwu ya kachasị amasị ya: Ahịa, mmalite, ahịa na asịrị azụmahịa NBA.